वास्तविक-समय प्रकाशन र खोजी | Martech Zone
बिहीबार, मार्च ० 4, २०२० आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
वास्तविक समय... यो एकदम महत्त्वपूर्ण तत्व भइरहेको छ। वेबट्रेंड्सले सतर्कताहरूसँग मिलेर वास्तविक-समय खोजी जारी गरेको छ। PubSubhubbub ब्लगहरुका लागि उभरदैछ उनीहरूको फिडहरु धक्काको लागि तिनीहरूलाई पुन: प्राप्त गर्नु भन्दा। खोजी प्रतिक्रिया समय संकुचन हुँदैछ ... मानिसहरूले प्रश्नहरूको उत्तरहरू अपेक्षा गरिरहेका छन् जुन केवल केहि मिनेट अघि सोधिएको थियो।
प्रकाशकहरूको लागि, चुनौती भनेको जब प्रतिक्रिया हुन्छ प्रतिक्रिया गर्नु र त्यसलाई तुरून्तै ठूला बनाउनु हो। यदि तपाई मोबाईल उद्योगमा हुनुहुन्छ र नया हुन्छ भने तपाईले सकेसम्म चाँडो प्रकाशित गर्नु पर्छ। यो केवल लोकप्रियता मात्र हो जुन यातायात चलाउँदैछ, यो तपाईंको प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता पनि हो।
केहि दिन अघि, मैले चाचाको लागि एक WordPress प्लगइन प्रकाशित गर्‍यो। प्लगइन चाचाको विशाल नेटवर्कको प्रश्नहरूको केहि तत्वहरूको परीक्षणको संयोजन हो - अब एपिआइ, सामयिक फिडहरू र अनुकूलन फिडहरू मार्फत उपलब्ध छ। प्लगइनसँग केहि साइडबार विजेटहरू छन् - वास्तविकतामा वास्तविक प्रश्नहरूको लागि सोधेको र जवाफ पछाडि पुनः प्राप्त गर्नका लागि। धेरै राम्रो
ब्लग मालिकहरूका लागि, मैले एक चाचा ट्रेंड्स ड्यासबोर्ड पनि समावेश गरें जुन ब्लगर्सहरूलाई चाचा, ट्विटर र गुगलमा ट्रेन्डिंग डाटाको एक सिंहावलोकनको साथ प्रदान गर्दछ! ट्रेंडिंग जानकारी अवलोकन गरेर, तपाई शीर्षकका ट्राफिकको क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुनेछ जुन व्यक्तिहरूले सोधिरहेका छन्, खोजी गर्दैछन् वा छलफल गरिरहेका छन्।
कृपया मलाई तपाईको बिचार के हो थाहा दिनुहोस्! केवल तपाईंको प्लगइन डाइरेक्टरीमा जानुहोस्, नयाँ थप्नुहोस्, र चाचाको लागि खोजी गर्नुहोस्। स्थापना क्लिक गर्नुहोस् र यसले प्लगइन स्थापना गर्दछ। साइडबार विगेट्स प्रयोग गर्नका लागि, चाचाबाट विकासकर्ता लगइनका लागि दर्ता गर्नुहोस् र तपाईं माथि हुनुहुनेछ र केहि बेरमा चल्नुहुनेछ! यदि तपाईं सजिलै ड्यासबोर्ड चलाउन चाहानुहुन्छ भने, मा केहि पनि लेख्नुहोस् एपीआई कुञ्जी क्षेत्र।
सबै स्रोतहरुमा पप संस्कृतिबाट धेरै नै आवाज आएको छ, तर तपाईले यो मणि भेट्टाउनुहुनेछ हरेक पटक एक चोटिमा क्यापिटल गर्न। तपाईंको सामग्रीमा वास्तविक-समय सर्तहरूको प्रयोग र सामग्री छिटो प्रकाशनले तपाईंको ब्लगलाई अप्रत्याशित यातायातको एक बिट प्रदान गर्न सक्दछ।
प्रकटीकरण: ChaCha एक ग्राहक हो